Iimpawu ze-Emmeline Pankhurst: i-British Suffrage Radical
U-Emmeline Pankhurst wayeyaziwayo kakhulu kwiinkokeli zephiko eliphikisanayo leentshukumo zabamabhinqa e-Great Britain ekuqaleni kwekhulu lama-20.
Iimpawu ezikhethiweyo ze-Emmeline Pankhurst
Ingxabano yecala ephukileyo yeglasi yimbambano ebaluleke kakhulu kwezopolitiko zanamhlanje.
Kufuneka sikhulule isiqingatha sabantu, abafazi, ukuze bancede ukukhulula esinye isiqingatha.
Izenzo, kungekhona amagama, yayiza kuba sisiqalo sethu esingapheliyo.
Thembela kuThixo: Uya kunika.
Ngethuba nje abafazi bevuma ukulawulwa ngokungekho sikweni, baya kuba; kodwa ngokuthe ngqo abasetyhini bathi: "Sigweba imvume yethu," asisoze sasilawulwa nangoko nje ukuba urhulumente akalunganga.
Silapha, kungekhona ngenxa yokuba singabantu abaphula umthetho; silapha kwimigudu yethu yokuba ngumthetho.
Umoya ohambelayo wobutyebi unzulu kwaye uhlala uhlonipha ubomi bomntu.
Unokwenza ingxolo engaphezulu kunoma yimuphi umntu, kufuneka wenze ngokwakho ngaphezu komnye umntu, kufuneka ugcwalise onke amaphepha ngaphezu kwanoma yimuphi umntu, ngokwenene kufuneka ube khona kuyo yonke ixesha uze ubone ukuba abakhethi ungaphantsi, ukuba ngokwenene uya kufumana inguqu yakho.
Kuhlala kubonakala kum xa amalungu e-anti-suffrage amalungu kaRhulumente ahlambalaza ukuxhatshazwa kwabasetyhini ukuba injengezilwanyana zezilwanyana ezihlambalazayo izilwanyana ezihlambalazayo ziphendulela ngokukhawuleza xa zifa.
Ndabona ukuba amadoda akhuthazwa ngumthetho ukuba asebenzise inzuzo yabasetyhini. Abafazi abaninzi baye bacinga njengokuba ndinayo, kwaye iminyaka emininzi, iye yazama, ngoloo mpe mbelelo esiye siyikhumbuza ngaso rhoqo, ukuguqula le mithetho, kodwa siyifumana ukuba impembelelo ayibala. Xa sasiya kwiNdlu yeeMimandla saye saxelelwa ukuba, xa siphikelela, ukuba amalungu ePalamente ayengabangela uxanduva kubasetyhini, babenomsebenzi kuphela kubavoti, kwaye ukuba ixesha labo lixakeke ngokupheleleyo ukuguqula loo mithetho, nangona Bavuma ukuba bafuna ukulungiswa.
Oorhulumente baye bazama ukuphazamisa ukufuduka kwemibutho, ukutshabalalisa iingcamango, ukubulala into engenakufa. Ngaphandle kokuqwalasela imbali, ebonisa ukuba akukho Rhulumente aphumelele ukwenza oku, baqhubeka bezama ngendlela endala, engenangqiqo.
Ndifuna ukuthetha kuni ocinga ukuba abafazi abaphumelelanga, siye sazisa urhulumente waseNgilandi kule ndawo, ukuba kufuneka ubhekane nalolu hlobo: nokuba ngabafazi bafanele babulawe okanye abafazi bafanele bavotelwe.
Kukho into eyenziwa yiGosa elide ngaphezu kobomi bomntu, kwaye oko kukukhuseleko kwipropati, kwaye ke kukungena kwipropati esiya kukubetha intshaba.
Yiba ngumlindi ngendlela yakho! Abo ba ngawaphula iifestile, bawaphule. Abo benu banokuqhubeka behlasela isithunzi esiyimfihlo sakhiwo ... yenza njalo. Kwaye ilizwi lam lokugqibela kuRhulumente: Ndikhuthaza le ntla nganiso. Ndithabathe xa uthe wagqiba!
Kuhluke njani ukuqiqa ukuba amadoda ayamkela xa bexoxa ngamatyala amadoda kunye nalawa mabhinqa.
Amadoda enza ikhowudi yokuziphatha kwaye alindele ukuba abafazi bamkele. Benze isigqibo sokuba kulungile kwaye kulungile ukuba amadoda alwe nenkululeko yabo namalungelo abo, kodwa ukuba akulungile kwaye kulungile ukuba abafazi balwe nabo.
Ukuxhatshazwa kwamadoda, kuzo zonke iinkulungwane, kuye kwagxininisa ihlabathi ngegazi, kwaye ngenxa yezenzo zokuphazamiseka nokutshabalalisa abantu baye bavuzwa izikhumbuzo, ngeengoma ezinkulu kunye neengqungquthela. Ukuxhatshazwa kwamabhinqa kuye kwabangela ubomi bomi bomi bukhulule ubomi babo bawalwela imfazwe yobulungisa. Ixesha elilodwa liza kubonisa ukuba yeyiphi umvuzo oza kubelwa kwabasetyhini.
Iyintoni ukusetyenziswa kokulwa kwevoti xa singenalo ilizwe lokuvota?
Ubulungisa kunye nomgwebo zihlala ziphela kwihlabathi.
Olongezelelweyo Ngo-Emmeline Pankhurst
I-Pankhursts: Emmeline, Christabel, uSylvia
Quotes Christabel Pankhurst
Iingqapheli ezininzi zeBhinqa ngegama:
A B A C A M A M A M A M A M A M A M A U XYZ
Iqoqo le-Quote ehlanganiswe nguJone Johnson Lewis.
AbaPhathi beProfayili Yomculi